Ogaden News Agency (ONA) – Madaxweynihii horee Itobiya oo saacada ka hor xabsiga loo taxaabay iyo xaalada Itobiya oo ka sii dareysa
Madaxweynihii horee Itobiya oo saacada ka hor xabsiga loo taxaabay iyo xaalada Itobiya oo ka sii dareysa
Ciidamada sirdoonka Itobiya ee ka hawlgala caasimadda Adisababa ayaa xabsiga dhigay M/W hore ee dalka Dr. Negasso Gidada, inkastoo warar kale ay sheegayaan in la soo daayay saacada ka dib markuu warkii gaadhay meelwalba oo laga cabsaday inuu shacabka gadoodo, maadaama uu yahay shaqsi ixtiraam ku dhex leh dalka.
Dr. Negasso wuxuu madax ka yahay xisbiga mucaaradka ah ee lamagac baxay UDJ (Union for Democracy and Justice). Xisbigan ayaa diyaarinayay banaanbax balaadhan oo la filayo inla qabto maalinta Axada ah ee 29ka Sep.
Waxaa aad u qasan guud ahaan Itobiya oo hadda aad moodo inay dadkii shacabka ahaa ku sii dhiiranayaan banaanbaxyada iyo inay muujiyaan diidmadooda adoonsiga uu ku hayo shacabka qawmiyadda Tigreega. Gaar ahaan waxay cabsida sii yaraatay intay ka gadoodeen dadka muslimiinta ah faragalinta lagu hayo diintooda oy banaabxayada joogtada ah dhigayeen. Sidoo kale Xisbiga Blue party ayaa banaabxayo ka yaabiyay xukuumadda EPRDF ka dhigay Adisababa iyo meela kale.
Waxaa todobaadkii hore ka dhacay qaraxyo waaweyn magaala madaxda gobolka Wallo halkaasoo dhalinyara badan loo qabqabtay oo xabsiyada la dhigay. Arimahaa oo idil waxay muujinayaan inay shacabka Itobiya ka xorrobayaan cabsidii uu ku beeray Wayaanaha. Xisbiyada mucaaradka ah iyo jabhadaha hubaysan ayay wadahadalo uga socdaan meela kala duwan oo wada abaabul hoose oo ka yaabin doona Wayaanaha.